ubulili kanye ne-porn | Isisekelo Sokubonga: Uthando, Ubulili kanye ne-Intanethi
Ikhaya Relationships Ezocansi Nezocansi
Igama elithi izithombe zobulili ezingcolile livela emagameni esiGreki athi "porno" nelithi "graphie" elisho "imibhalo noma mayelana nezifebe".
Izithombe zobulili ezingcolile njenge-stimulus zingena emzimbeni ngokuqondile ngezinzwa, ikakhulukazi amehlo nezindlebe. Inokuxhumana ngokuqondile nesistimu yenzwa yomphakathi, ikakhulukazi uhlelo lokuvuza noma isikhungo senjabulo yobuchopho. Inikeza ukuvusa okusheshayo ngokocansi. Izinguquko zomzimba ezibangela ukuthi zenzeke ngokushesha: inhliziyo ishaya ngokushesha; Ukuphefumula kuyaba mnandi futhi umlindi uqala ukuzizwa ephuza emithini yezocansi.
Izithombe zobulili ezingcolile namuhla nge-intanethi zihlukile kwezithombe zobulili ezingcolile zesikhathi esidlule. Izithombe ezinama-static omagazini ka-gentlemen noma ama-movie ama-blue abanayo umthelela ebuchosheni bokuthi ukusakaza kwamanje okungapheli, ama-hyper-stimous videos. Ukusebenzisana kwe-intanethi kuvumela abantu ukuba bahambe kalula emakhakheni amaningi okuvusa ngokushesha nje lapho beba nesithukuthezi ngokuhamba kwamanje. Njengoba abantu bebuka izithombe eziningi zobulili ezingcolile, ubuchopho babo buqala kancane kancane ukukhiqiza kancane i-dopamine ukuphendula. Lokhu kuholela ekufisweni kwesinciphiso ngalokho abakubhekayo. Noma kunjalo bangabuyisela ibhalansi ye-dopamine ngokubuka amavidiyo amaningi ashaqisayo noma amahle. Lezi ziletha ngokushesha 'hit' enkulu ye-dopamine.
Umzimba uthanda ibhalansi. Uma sinezokudla okwanele, siphuza noma ubulili ubuchopho bethu bubonakalisa ukuthi buwanele. Lesi siginali satiation sisisiza ukuba siyeke ukudla, ukuphuza noma ukuya ocansini ukuze sikwazi ukuqhubeka neminye imisebenzi edingekayo ekuphileni kwansuku zonke. Kodwa uma 'sibheka' ngokwezinto noma ukuziphatha, le ndlela yokukhipha isingeniswa isikhashana okwesikhashana, ehambisana nokutholakala kwesisusa sokuzidla. Ngamanye amazwi, ubuchopho bethu buhumusha ukubhapathiza embusweni njengesidingo 'sokusinda' futhi sivumela ukuthi siqhubeke sizitholela okwesikhashana. Cabanga ngebheyi ngaphambi kokuba ubusika ubusika, kungagwinya i-salmon ye-20 ngaphandle kokugula.
Iningi lezintombi ezisencane namuhla zisebenzisa i-porn yezemfundo mayelana nobulili kanye nezinjabulo. Bavame ukuyibuka yedwa. Lo mkhuba wokuzivocavoca ucabangela ubuchopho bawo obubucayi ngokuhamba kwesikhathi ukulindela indlela entsha yokuvuselela. Kungabangela ekuthuthukiseni izitshalo, izinguquko ezingalindelekile ekunambeni kobulili nokulutha kwabanye. Lokhu kusebenza nakakhulu kubantu abadala, abaningi babo abaqala ukubuka izithombe ezingcolile kusukela ekuqaleni kokukhula kwabo. Leli fomu lokuqeqeshwa kobuchopho linciphisa umlindi wezinzuzo zezempilo, ukuthuthukiswa komuntu siqu kanye nezinjabulo eziningi zobuhlobo bobulili wangempela.
Amadoda amaningi abambelela kwi-pornya enza kanjalo ngokuhlela 'ividiyo ngayinye entsha, esicishe ifinyelele ekupheleni komzimba ngokushaya indlwabu kodwa hhayi ngempela. Lokhu kuvumela ukuthi bahlanganyele nezithombe zokuvusa ucansi amahora namahora. Abasebenzisi bahlale befuna leso sithombe esiphelele ukuphela. Abazizwa benesisindo njengoba bengase benze uma beya ocansini nomcibisholo nomlingani ofikayo.
Izithombe zobulili ezingcolile ze-Intanethi zifana nenkathi yokukhwelana, kepha inkathi yokukhwelana engapheli Ubuchopho bokuqala bukubona 'njengokuhlanya kokudla', ithuba elikhulu lokukhulelwa futhi kucishe indlela yokusuthisa. Ubuchopho bese buzijwayeza ukujwayela lokhu okungakaze kube khona nge-bonanza - abalingani abazimisele abangapheli abafuna ukukhulelwa esingaveza nabo isifiso sethu sobulili.
Ngokusetshenziswa kwesifiso socansi se-intanethi ku-intanethi kusetshenziselwa abantu abangabazi ngenzuzo yabo kanye nokulimaza kwethu. Ukusetshenziswa kabi kwe-porn ye-intanethi kuyingozi nakakhulu kubantu abasha abanesibindi sokufunda ngocansi njengokulungiselela ukukhula kwabantu abadala. Bafunda ukucwilisa ubuchopho babo ezintweni ezibonakalayo. Esikhundleni sokufunda indlela yokudlala ngothando, ugcine ukuxhumana ngamehlo, ukuthuthukisa inhlonipho nokuthinta ngendlela enothando noma ngokocansi nabalingani bangempela abangabakhona, abantu bayindlela eqinisa emiklomelo eyenziwe.
<< Ukunciphisa Isifiso Sezocansi